Oppo A54 5G: niile nkọwa na price e leaked | Gam akporosis
Oppo A54 5G: ya leaked ụdịdị gụnyere Snapdragon 480 na 48 MP quad igwefoto
Oppo na-akwadebe mwepụta nke ọnụ ọnụ dị ọnụ ala yana atụmatụ dabara adaba na nkọwapụta teknụzụ. Ma ọ bụ na anyị na-ezo aka Oppo A54 5G, a mobile na anyị maara ọtụtụ ihe banyere ekele na ọtụtụ leaks na anyị weere na-adịbeghị anya.
Ọnụahịa ahụ enwebeghị ụbọchị mmalite nke ndị nrụpụta kwupụtara. Agbanyeghị, ekwenyere na n'ime ụbọchị ole na ole a ga-ekpughere ya.
1 Oppo A54 5G Leaked Tech Spec na atụmatụ
1.1 Ọnụahịa na nnweta
Oppo A54 5G Leaked Tech Spec na atụmatụ
Ihe mbụ anyị ga - enweta na ekwentị ọnụahịa a dị ọnụ ala bụ imewe na ilele anya mbụ nwere ike inwe mgbagwoju anya na nke etiti na ọbụna nke dị elu. Nke a bụ n'ihi na ọ ga-eji ihuenyo zuru oke nwere oghere n'ime ya maka igwefoto selfie nke ga-adị na akuku aka ekpe elu. Ngwongwo ndị ga-ejide ihuenyo ga-adị oke obere, yabụ ngebichi na-ahụ ga-adị elu karịa 90%, nke dị mma.
Na azụ azụ nke Oppo A54 anyị ga-ahụ naanị modul igwefoto; onye na-agụ akara mkpịsị aka na-ahụ anya site na enweghị ya, mana nke a apụtaghị na ọ ga-agwakọta ya n'okpuru ihuenyo. Kama nke ahụ, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara na ọ họọrọ maka ndị na-agụ akwụkwọ n'akụkụ, nke a ga-etinye ya n'akụkụ aka nri nke ekwentị ahụ. Site na nke a, anyị nwere ike ịchọpụta na panel ahụ anaghị adaba na ihe mmetụta akpakọtara wee kwuo, ya mere, ọ bụghị OLED ma ọ bụ AMOLED, nke na-ahapụ anyị ihe IPS LCD teknụzụ ihuenyo iji belata ụgwọỌfọn, anyị na-ekwu maka ekwentị nke ga-abụ ọnụ ala.
Ugbua abanyela n'ime ihe anyị nwere ike ịtụ anya na ọkwa nke nkọwa, Anyị ga-enwe njedebe anyị na ikpo okwu mobile Qualcomm Snapdragon 480, nke nwere isi asatọ ma nwee ike ịrụ ọrụ na oge elekere kacha elu nke 1.8 GHz. Maka eserese na nhazi egwuregwu, enwere Adreno 619 GPU. N'aka nke ya, enwere ebe nchekwa RAM nke, maka ụdị a, bụ 4 GB, ebe a na-enye ebe nchekwa dị n'ime dị ka 64 GB. N'ebe a, anyị ga-enwe oghere kaadị microSD maka mgbasawanye n'ime ebe nchekwa.
Batrị nke ga - eme ka ihe niile rụọ ọrụ ma ọ dịkarịa ala otu ụbọchị na iji ojiji eme ihe ikike nke 5.000 mAh. Amabeghị ma ọ bụrụ na nke a ga - enwe teknụzụ na - agba ọsịsọ, mana ihe niile na - egosi na ọ ga - abụ 18 W. A ga - enwe ụdị USB C maka ịgba ụgwọ, ọ bara uru ịkọba ama.
Banyere igwefoto, a ga-enwe modulu quad nke 48 MP na-eduzi isi ihe; nke a ga-esi na Sony, IMX586, mana ọ ka mma ichere maka nkwenye na nke ahụ. Ihe mmetụta atọ ndị ọzọ ga-ejikọta oghere anya ga-abụ 8 MP, nke ga-abụ maka foto sara mbara, na ụzọ ọzọ nke 2 MP maka foto macro yana omimi nke mmetụta ubi (ọnọdụ bokeh). Igwefoto selfie, n'aka nke ọzọ, nke ga-adị na oghere dị na oghere Oppo A54 5G, ga-enwe mkpebi nke 16 MP ma ga-abịa na ọrụ AI dị ka ịchọ mma ihu, na mgbakwunye na-ejekwa maka ihu ihu na Ọzọ.
A ka nwere nkọwa mara maka ọnụahịa na nnweta nke ama ama dị ọnụ ala. Agbanyeghị, a na-eche na onye nrụpụta ụlọ ọrụ China ga-ahapụ ya n'oge na-adịghị anya nakwa na ọ gaghị ewepụta ya tupu Mee. Ọzọkwa, Japan nwere ike ịbụ mba izizi nabatara gị, yabụ ọ gaghị erute Europe na akụkụ ndị ọzọ nke ụwa ruo June.
N'otu aka ahụ, ụfọdụ mgbasa ozi egosila na ụlọ ọrụ ahụ ga-ebupụta ya na mbụ na n'ụwa niile. Nke a ka ga-ahụ, mana ọ bụrụ na anyị nwere ihu ọma, n'ihe gbasara ụbọchị ole na ole ma ọ bụ izu ole na ole anyị nwere ike ịma ihe niile.
N'ikpeazụ, A ga-emepe Oppo A54 5G na ọnụahịa dị n'etiti euro 200 na 300 na Europe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Oppo A54 5G: ya leaked ụdịdị gụnyere Snapdragon 480 na 48 MP quad igwefoto
New Redmi K40, K40 Pro na K40 Pro +, atọ dị oke ọnụ ala dị elu na-eji 120 Hz enyo
Huawei wearables ga-enwe ike ịwụnye ngwa sitere n'aka ndị mmepe ndị ọzọ